admin – MM Pandora
Myanmar Pandora News & Media
“Queendom” ပြီးတော့ “Kingdom” လာတော့မှာလား
October 15, 2019 October 15, 2019 admin0 commentsMMPandora-K
[Zawgyi] Mnet ကနေ ထုတ်လွင့်ပြသနေတဲ့ variety show တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Queendom” ဟာ ခုချိန်မှာ လူကြိုက်များပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလေးပါ။ Queendom အကြောင်းကိုအရင်ဆုံး intro လေး ပြောပြချင်ပါတယ်နော်။ Queendom ဆိုတာက ပွဲထွက်ပြီးသား အမျိုးသမီး အဆိုတော်တွေကို ခေါ်ပြီး အချင်းချင်း ပြန်လည် ယှဉ်ပြိုင် စေတဲ့ ပြိုင်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲ လေးမှာ ပါဝင် အဆိုရှင်တွေကတော့ Oh My Girl , G-Idle , Mamamoo ,Lovelyz , AOA နဲ့ Park Bom တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာ “Queendom” အနေနဲ့ ပြီးဆုံးတော့မှာ ဖြစ်တဲ့ …. Read More
“Feel Special” နဲ့ ၆ ကွိမျမွောကျ music show win သှားတဲ့ TWICE
October 11, 2019 admin0 commentsMMPandora-K
[Zawgyi] TWICE ဟာ မကြာသေးခင်ကမှ ပရိသတ်တွေဆီကို “Feel Special” ဆိုတဲ့ mini album လေးနဲ့ comeback လေးလာခဲ့ပါတယ်။TWICE ရဲ့ “Feel Special” mini album ထဲမှာ Feel Special, Rainbow, Get Loud,Trick It ,Love Foolish , 21:29 နဲ့ Breakthrough (Korean Version) ဆိုပြီး သီချင်း ၇ပုဒ်ပါပါတယ်။ October6ရက်နေ့ Mnet ကနေ ထုတ်လွင့်လိုက်တဲ့ M Countdown မှာ TWICE ဟာ Feel Special နဲ့ ၆ကြိမ်မြောက် music show …. Read More
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Oricon Chart မှာ ဒုတိယနေရာထိရောက်လာတဲ့ Seventeen ရဲ့ An Ode
October 7, 2019 admin0 commentsMMPandora-K
[Zawgyi] ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး Oricon Chart မှာ Seventeen ရဲ့ ကိုးရီးယား အယ်လ်ဘမ် လေး “An Ode” က ဒုတိယနေရာထိရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ Oricon Charts ရဲ့ Weekly Album Chart မှာ Seventeen ရဲ့ တတိယမြောက် full album လေး An Ode က ဒုတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေတယ်ဆိုပေမယ့် Overseas Chart မှာတော့ ပထမနေရာမှာပါ။ Seventeen ရဲ့ An Ode အယ်လ်ဘမ်လေးက တော်တော်လေးကို နာမည်ကြီး နေပါပြီ။ ဒီအယ်လ်ဘမ်လေးက Seventeen ကို Gaon Chart မှာ ထုတ်ဝေပြီး ပထမအပတ်အတွင်းမှာပဲ …. Read More
September 29, 2019 admin0 commentsMMPandora-K
[Zawgyi Version] September 24 ရက်​​နေ့မှာ Good Data Corporation က September 16 ရက်​​နေ့မှ September 22 ရက်​​နေ့အတွင်း နာမည်​အကြီးဆုံး variety show တင်​ဆက်​သူ စာရင်း​လေးကို ထုတ်​ပြန်​ခဲ့ပါတယ်​။ ပထမ​နေရာမှာ​တော့ Queendom ပြိုင်​ပွဲဝင်​ Oh My Girl ကရပ်​တည်​​နေပါတယ်​။ Oh My Girl က Queendom အပိုင်း ၄ မှာ Lovelyz ရဲ့ Destiny သီချင်း ကို ​ရှေး​ခေတ်​ ကိုးရီယား ​တေးဂီတသံ​တွေနဲ့ ​ပေါင်းစပ်​ပြီး လှလှပပ cover ပြန်​ဆိုခဲ့လို့ နာမည်​ကြီး လာခဲ့ပါတယ်​။ ဒုတိယ​နေရာမှာ​တော့ SBS …. Read More
​မွေး​နေ့တူတဲ့ အလိုက်​ဖက်​ဆုံး Idol စုံတွဲသုံးတွဲ
September 25, 2019 admin0 commentsMMPandora-K
[Zawgyi Version] ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ နာမည်​တူမရှား လူတူမရှားသလို ​မွေး​နေ့တူတဲ့ idols ​တွေလည်းမရှားပါဘူး။ ကဲခု​တော့ ပရိသတ်​​တွေ အတွက်​ အက်​ဒ်​မင်​ အကြိုက်​ဆုံး ​မွေး​နေ့တူတဲ့ idols စုံတွဲသုံးတွဲ ကို ​ဖော်​ပြ​ပေးမှာပါ။ ဒါနဲ့ စုံတွဲဆိုတာက ဒီတိုင်း​လေး ​မွေး​နေတူလို့ တွဲ​ပေးတာ​နော်​။ ​နောက်​ပြီး စုံတွဲဆိုတိုင်း ချစ်​သူရည်းစားကို ဆိုလိုတာမဟုတ်​ပါ​နော်​။ ပထမဆုံး တစ်​တွဲ​အ​နေနဲ့ BLACKPINK ရဲ့ Visual ​လေး Jisoo ​လေးနဲ့ AOA ရဲ့ visual ​လေး Seolhyun တို့ဖြစ်​ပါတယ်​။ နှစ်​​ယောက်​လုံးရဲ့​မွေး​နေ့က​တော့ 1995 ခုနှစ်​ January3ရက်​​နေ့ဖြစ်​ပါတယ်​။ နှစ်​​ယောက်​ လုံးသာ စုံတွဲအဖြစ်​ အဖွဲ့တစ်​ခုထဲမှာ ရှိ​နေမယ်​ဆိုရင်​​တော့ …. Read More